09 788 888 434 \_ info@esmemm.com \_ Q&A
E-Leraning	B2B Links
- KPI Appraisal Form (၀န်ထမ်းစွမ်းဆောင်ရည် သုံးသပ်မှုဖောင်ပုံစံများရှိခြင်း) - Report Form (လုပ်ငန်းအတွင်း အစီရင်ခံစာတင်ပြမှု ဖောင်ပုံစံများထားရှိခြင်း) စတဲ့ SOP နည်းစနစ်များနှင့်အတူ ဒွန်တွဲပြီးသုံးပြီး SOD စာရွက်စာတမ်း စနစ်များဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်နည်းစနစ်ကျစေဖို့ စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Equity Financing & Mergers ငွေကြေးအရင်းအနှီးပေါင်းစည်းနှင့် လုပ်ငန်းပေါင်းစည်းဝယ်ယူခြင်း အကြောင်းရှင်းပြပေးပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်မှုဆိုရာမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်စဉ်ရဲ့ (ထုတ်လုပ်မှု)၊ (ကုန်သွယ်မှု)၊ (၀န်ဆောင်မှု) ဟုဆိုသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြားသဘောတူညီမှု (သို့) လုပ်ငန်းရှင်နှစ်ဦး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသကဲ့သို့ လုပ်ငန်းပေါင်းစပ်မှုဖြင့် အရင်းအနှီးရရှိမှု၊ လုပ်ငန်းတန်ဖိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးမြင့်တက်မှု၊ နည်းပညာ အားသာမှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများဟာလည်း သိသိသာသာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းပေါင်းစည်းခြင်းရဲ့ သဘောဟာ Win-win Development မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ Synergy ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး (၁+၁=၃) ဖြစ်တဲ့ သဘောပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ SMEs လုပ်ငန်းတွေ (ထုတ်လုပ်သူများနဲ့ + ကုန်သွယ်သူနဲ့ပေါင်းခြင်း + ဈေးကွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူနဲ့ ထပ်ပေါင်းခြင်း) စတဲ့ Merger လုပ်ငန်းများပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် ဈေးကွက်မှာ Synergy ပိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့သဘောမျိုးပါ။
Stock Exchange (စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ဟူသည်) ငွေချေးစာချုပ်များ၊ ရှယ်ယာများကို ရောင်းဝယ်သောဈေးကွက်ဖြစ်ပြီး၊ ဈေးနှုန်းကို (၀ယ်လိုအား၊ ရောင်းလိုအား) ဖြင့် ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ငွေဖြစ်လွယ်မှု၊ ဈေးကွက်မျှတမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုများဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက် ကာကွယ်မှုများကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး Capital Market ဈေးကွက်အရင်းအနှီး ဖော်ဆောင်ပေးတဲ့ စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာဖြစ်ပါသည်။ Stock Exchange နဲ့ ပတ်သက်လာရင် အခြေခံပါဝင်လည်ပတ်နေတဲ့ (၆-ချက်) ကို နားလည်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Stock Exchange အရောင်းအ၀ယ်ဆိုရာမှာ အတိုချုပ်ပြောရရင် (၂-မျိုး) ပဲရှိပါတယ်။ တခုက Trading ပုံစံနဲ့ အချိန်တိုအတွင်းမှာ (Shot-term ၀ယ်-ရောင်း) လုပ်တာမျိုးနဲ့၊ နောက်တမျိုးက Investment ပုံစံနဲ့ ရေရှည်အတွက် (Long-term ၀ယ်-ရောင်း) လုပ်တဲ့ ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရန် စီးပွားရေး အဆက်သွယ်ကောင်းတွေကို မည်သို့ချိတ်ဆက်သင့်ပါသလဲ?
၂၁ ရာစုမှာ ခေတ်စားလာတဲ့ E-Commerce အင်တာနက် အွန်လိုင်းစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာအကြောင်း ရှင်းပြပေးပါ။ ရာစုတွေ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရတဲ့ စနစ်တွေဟာလည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါပြီ၊ ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်ရဲ့ E-commerce ဆိုတဲ့ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာာမှာတော့ B2B ဆိုတဲ့ (Business to Business - စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မှ စီးပွားရေးရှင်များသို့) နောက်တခုကတော့ B2C ဆိုတဲ့ (Business to Consumer - စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မှ စားသုံးသူသို့) စတဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ ထိရောက်မြန်ဆန်တဲ့ ဈေးကွက်ကိုဖော်ဆောင်ကြပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူ - ကိုယ်စားလှယ် - လက်လီ/ လက်ကား - စားသုံးသူ ဆိုတဲ့ ဈေးကွက်ကွင်းဆက်မှာ B2B ပုံစံနဲ့ ထုတ်လုပ်သူမှ ဈေးကွက်ကြီးမားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် သို့ တဆင့်ပုံစံနဲ့ ဈေးကွက်အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ခြင်းပါပဲ။
လုပ်ငန်းအသစ်ထူထောင်ရန် ငွေကြေးအရင်အနှီးကို မည်သို့ရှာဖွေနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းစတင်နိုင်ပါသလဲ? Business Analysis (စီးပွားရေး ဆန်စစ်သုံးသပ်ခြင်း) သဘောမှာ အခြေခံအချက်တွေကတော့ (PESTEL) ဆိုတဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ စီးပွားရေးတစ်ခုဆိုတာ ယခုအချက်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေခြင်းဖြစ်လို့ P – Political (ယခုနှင့် အနာဂတ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအလားအလာ)၊ E – Economical (အနာဂတ် စီးပွားရေး အခြေအနေ)၊ S – Social (လက်ရှိ လူမှုရေးရာနှင့် တိုးတက်လာမှု)၊ T – Technological (အလားအလာရှိတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာရေးရာ)၊ E – Environmental (လက်ရှိပြောင်းလဲလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ၊ မြို့ပြအနေအထားများ)၊ L – Legal (လက်ရှိပြဌါန်းထားတဲ့ ဥပဒေရေးရာ) စတဲ့ အခြေခံအချက်တွေကိုတော့ မျက်ခြေမပျက် ကြည့်နေသင့်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေရဲ့ အားသာချက်-အားနည်းချက် နဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဟာ SMEs လုပ်ငန်းတွေနဲ့ စီးပွားရေးအနေအထားတွေကို ထပ်တိုးချဲ့မှု၊ စောင့်ကြည့်မှု၊ လျော့ချမှု စတဲ့ အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲရပ်တည်မှုတွေကိုတော့ ဆန်းစစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျင့်သုံးနေသော Business System ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်များအကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြပေးပါ။ ကမ္ဘာတွင် နာမည်ကြီးသော စီးပွားရေးစနစ်များထဲမှ စနစ် (၃-မျိုး) အဓိကကျင့်သုံးကြတာတွေ့ရပါတယ်။
အစိုးရမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အများစုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပြည်သူလူထုမှ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ကို အကန့်အသတ်ဖြင့်ထားရှိသည့် စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ (Demand & Supply) ၀ယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအားပေါ် အခြေမခံထားပဲ ကုန်စည်များ၏ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များအား အစိုးရမှသတ်မှတ်ထားပြီး ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို အကန့်အသတ်ထားရှိသည့် စီးပွာေးရးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့သောနိုင်ငံများသည် Capitalism (ဈေးကွက်အရင်းအနှီးဝါဒ)၊ Socialism (ဈေးကွက်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ)၊ Communism (ဈေးကွက်ကွန်မြူနစ်ဝါဒ) စနစ် (၃-မျိုး) ကို ပေါင်းစပ်ပြီး Mixed Economic (စီးပွာရေးစနစ်ရောနှောမှုပုံစံ) ဖြင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကို ဘက်စုံမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲလျှက်ရှိပါတယ်။
Business Analysis (စီးပွားရေး ဆန်စစ်သုံးသပ်ခြင်း) သဘောမှာ အခြေခံအချက်တွေကတော့ (PESTEL) ဆိုတဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ စီးပွားရေးတစ်ခုဆိုတာ ယခုအချက်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေခြင်းဖြစ်လို့ P – Political (ယခုနှင့် အနာဂတ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအလားအလာ)၊ E – Economical (အနာဂတ် စီးပွားရေး အခြေအနေ)၊ S – Social (လက်ရှိ လူမှုရေးရာနှင့် တိုးတက်လာမှု)၊ T – Technological (အလားအလာရှိတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာရေးရာ)၊ E – Environmental (လက်ရှိပြောင်းလဲလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ၊ မြို့ပြအနေအထားများ)၊ L – Legal (လက်ရှိပြဌါန်းထားတဲ့ ဥပဒေရေးရာ) စတဲ့ အခြေခံအချက်တွေကိုတော့ မျက်ခြေမပျက် ကြည့်နေသင့်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေရဲ့ အားသာချက်-အားနည်းချက် နဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဟာ SMEs လုပ်ငန်းတွေနဲ့ စီးပွားရေးအနေအထားတွေကို ထပ်တိုးချဲ့မှု၊ စောင့်ကြည့်မှု၊ လျော့ချမှု စတဲ့ အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲရပ်တည်မှုတွေကိုတော့ ဆန်းစစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ CSR စီးပွားရေး လူမှုတာဝန်ကျေပွန်မှုနှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ UN Global Compact ၏ လမ်းညွှန်ချက်များကို ဖော်ပြပေးပါ။
FDI နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုံးသပ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်လာမဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေအနေနဲ့ အခြေခံအားဖြင့် အချက် ၅ ချက်ကိုကြည့်ပါတယ်။ ၁-အချက်က ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု ဘယ်လောက်ရှိလည်းဆိုတာကြည့်မယ်။ ၂-အချက်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအလားအလာ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာကြည့်မယ်။ ၃-အချက်က ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာချမှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ၊ အလုပ်သမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်တွေကိုကြည့်မယ်။ ၄-အချက်က FDI အတွက် ဈေးကွက်နေရာအားသာချက်ကို ကြည့်ပြီး၊ ဇုံကျတဲ့ နေရာတွေ၊ မြို့တွေမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ Infrastructure လမ်း၊ မြေ၊ လျှပ်စစ်၊ အဆောက်အဦး စတဲ့ ရရှိနိုင်မှုအပိုင်း တွေကို အဓိကထားပြီး ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ FDI အတွက် ဒီအချက် (၅-ချက်) အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက FDI ၀င်ရောက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ MIC, DICA, SEZ Committee, Related Ministry and Association တွေဟာ အဓိကအဆုံးအဖြတ်ပေးမဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတခုရဲ့ စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာ ဖော်ဆောင်မှုနှင့်အတူ Focal Organization တွေ၏ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနှင့် ပေါင်းစပ်ဖော်ဆောင်မှုဟာ FDI ၀င်ရောက်မှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်စေဖို့ သုံးသပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စွန့်ဦးတီထွင်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်မီ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များကို ဖော်ပြပါ? စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာ ဦးစွာလုပ်ဆောင်ဖို့လိုတာကတော့ (Step – 1) Test & Survey (ကွင်းဆင်းလေ့လာမှု – စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်မှုအဆင့်) ပါ။ (%) အနည်းကို လုပ်ငန်းမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး စတင်လုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ အခွင့်အရေးမရှိသေးရင်လည်း ရှုံးဆုံးမှုပမာဏဟာနည်းပါလိမ့်မယ်။ အဆင့် (၁) မှာ အဓိကကြည့်ရမှာက Want & Need (စီးပွားရေးရဲ့ လိုချင်မှုနဲ့ လိုအပ်မှု % ရှိရဲ့လား) Demand & Supply (မိမိရဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးမှုအတွက် ၀ယ်လိုအား % ရှိရဲ့လား) Risk & Return (အန္တရာယ်စွန့်စားမှုနဲ့ မိမိပြန်ရနိုင်ချေ % တွေရှိရဲ့လား) ဆိုတာတွေကို တွက်နိုင်ရပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက် (%) များရင်တော့ (Step – 2) Invest & Operation (ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အကောင်အထည်ဖော်မှု) အဆင့်ကို ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းစတင်ချိန်မှာလည်း Minimum Value Product (MVP) ဖြစ်တဲ့ မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ Core Feature တွေကို Focus ထားလုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှ အဆင့်ဆင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်သွားနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အသေးစိတ်ကို ၀ဘ်ဆိုဒ်ရဲ့ Business Plan Loan ဘဏ်ချေးငွေယူရန် မှာ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ခု၏ စီးပွားရေးတွင် SMEs လုပ်ငန်းများသည် မည်ကဲ့သို့သော အရေးပါနေသနည်း။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတွင် (၉၇ %) ခန့် သည် SMEs လုပ်ငန်းများဖြစ်ပြီး အကြီးစား SME (721) ခန့် နှင့် အသေးစား/အလတ်စား SME လုပ်ငန်းပေါင်း (126137) ခန့်ရှိသည်ဟု စီးပွားရေးစစ်တမ်းများအရ သိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံစီးပွားရေး၏ (၉၇%) ရှိသည့် (ထုတ်လုပ်မှု၊ ၀န်ဆောင်မှု၊ ကုန်သွယ်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး) စတဲ့ SMEs စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ပံ့ပိုးကူညီပေးမှုအတူ Private Market Orientation အသွင် ပုဂ္ဂလိက၏ စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်သို့ ဖော်ဆောင်နိုင်သော ဆောင်ရွက်ချက်များဖြင့် နိုင်ငံ၏ GDP ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း ပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်ပြီး (လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နည်းပညာ) ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတခုရဲ့ Gross Domestic Product (GDP) ကို မည်သည့်အချက်တွေကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်တိုင်းတာပါသလဲ။
လုပ်ငန်းပူးပေါင်းခြင်း သဘောသည် Synergy ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း (၁+၁=၃) ဖြစ်တဲ့ သဘောပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ SMEs လုပ်ငန်းတွေ (ထုတ်လုပ်သူနဲ့ + ကုန်သွယ်သူနဲ့ပေါင်း + ဈေးကွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူနဲ့ ထပ်ပေါင်း) ထိုနည်းဖြင့် ပေါင်းစပ်လာနိုင်ရင် ဈေးကွက်မှာ Synergy ပိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့သဘောမျိုးပါ။ Horizontal Merger ဟုခေါ်သော လုပ်ငန်းတူကုမ္ပဏီများ ပေါင်းစည်းခြင်း။ Vertical Merger ဟုခေါ်သော လုပ်ငန်းအချင်းဆက်စပ်မှုရှိသော ကုမ္ပဏီများပေါင်းစည်းခြင်း။ Congeries Merge ဟုခေါ်သော လုပ်ငန်းစု တမျိုးတည်း (Industry) ရှိ ပစ္စည်းမတူသော (Product) လုပ်ငန်းများ ပေါင်းစည်းခြင်း။ Conglomerate Merger ဟုခေါ်သော လုပ်ငန်းခြင်းလုံးဝမတူညီသော ကုမ္ပဏီများပေါင်းသည်းခြင်း။ Market Extension Merger ဟုခေါ်သော အမျိုးတူပစ္စည်းများကို မတူသော ဈေးကွက်များတွင်ရောင်းချနေသော လုပ်ငန်း (၂-ခု) ပေါင်းစည်းခြင်း။ Product Extension Merger ဟုခေါ်သော ပစ္စည်းအမျိုးအစားခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုခြင်းတူသော ကုမ္ပဏီ (၂) ခု ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုတဲ့ သဘောတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ FDI နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု JV မှာတော့ (49 % - 51 %) ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး (51 %) ရရှိသူက လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့် ပိုမိုရရှိနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံ (P.P.P) ဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် SMEs လုပ်ငန်းများကို မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်သလဲ။
လက်ရှိအနေအထားမှာ တိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အသင်းတွေကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် Public Private Partnership (P.P.P) အားကောင်းမှုကြောင့်ဆိုတာ မြင်သာပါတယ်။ P.P.P ဆောင်ရွက်မှုဟုဆိုရာတွင် (အစိုးရ + ပုဂ္ဂလိက + ပြည်သူ) များအားလုံးမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးသည့် Information (သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်မှု)၊ Technology (နည်းပညာပေါင်းစပ်မှု)၊ Finance (ငွေကြေးဖလှယ်စီးဆင်းမှု)၊ Market (ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ခိုင်မာလာမှု)၊ HR Capacity (လူ့စွမ်းအားအရင်းအနှီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု) စတဲ့ အခြေခံလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများကို ရေရှည်သဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသော နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးပြုမှုများကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုတွေကို တည်ဆောက်ပြီး P.P.P ဆောင်ရွက်မှုတွေ များလာနိုင်ရင်တော့ ယခင်ထက်ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကို ဖန်တီးလာနိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နည်းစနစ်ကျသော လုပ်ငန်းများဖြစ်လာရန်အတွက် မည်သည့်အချက်များဖြင့် လုပ်ငန်းကိုစီမံခန့်ခွဲသင့်ပါသလဲ။
SOP လမ်းညွှန်ချက်များစွာထဲမှ အခြေခံကျတဲ့လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲပုံစံများမှာ Planning (စီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း) နှစ်၊ ကာလအလိုက် လုပ်ငန်းရာထားချက်များ၊ Structure (ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုပုံစံ) လုပ်ငန်းအခြေအနေအလိုက် အရည်အသွေးမြင့်တင်မှု၊ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမှုများ၊ Communication (ပြန်ကြားဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်မှု) လုပ်ငန်းအတွင်းနှင့် ပြင်ပသို့ တိကျမြန်ဆန်မှန်ကန်သည့် ပြန်ကြားပေးမှုများ၊ Customer Focus (ဖောက်သည်များသို့ အခြေပြုဆောင်ရွက်မှု) ဦးတည်ရမည့်ဖောက်သည်များနှင့် လိုအပ်လာတဲ့ ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်း ပေးမှုများ၊ Sectoral Expertise (ဌာနအလိုက် မျှော်လင့်မှု) လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်သို့ ဌာနတစ်ခုချင်းအလိုက် ပြီးစီးဆောင်ရွက်ရမည့် ခွဲဝေသတ်မှတ်မှုများ၊ Innovation (ဆန်းသစ်တီထွင် ဆောင်ရွက်မှု) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်စနစ်အလိုက် အလိုက်သင့်ဆန်းသစ်တီထွင် ရပ်တည်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ Innovation များများလုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ရှေ့တန်းရောက်လာတာ တွေ့နိုင်မှာပါ။ SOP ချမှတ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်အပေါ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများမှ ပိုမိုနားလည်းသဘောပေါက်ပြီး လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုဟာ မြန်ဆန်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတခုရဲ့ စီးပွားရေးကိုသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါ Macro-Economic နှင့် Micro-Economic ကွဲပြားမှုကို သိပါရစေ။ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ စီးပွားရေးကို ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင် "Macro" စီးပွားရေးနှင့် "Micro" စီးပွားရေးဟူပြီး ပိုင်းခြားကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
HDI - Human Development Index (လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်း တိုင်းတာမှုအညွန်ကိန်း) ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့ ပညာရေး၊ ၀င်ငွေအဆင့်၊ စိတ်ကျေနပ်မှု စသည့်အချက်များဖြင့် တိုင်းတာသော အညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါသည်။ FDI နိုင်ငံခြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စီးပွားရေးအသုံးအနှုန်းတချို့ကို ဖော်ပြပေးပါ။ FDI - Foreign Direct Investment (နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု) ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ပြည်တွင်းတွင် တရားဝင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုနိုင်ရန် စီးပွားရေးဖိတ်ခေါ်ထားသော မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါသည်။
JV - Joint Venture (49% - 51%) (အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်း) ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းများ အကျိုးတူပူးပေါင်းရာတွင် ပြည်တွင်းမှ ၅၁ % နှင့် ပြည်ပမှ ၄၉ % သဘောတူညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ တင်သွင်းကုန် - တင်ပို့ကုန် လုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို ဖော်ပြပေးပါ။
တခြားသော တင်သွင်းကုန် - တင်ပို့ကုန် ဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များအား MOC Website – www.commerce.gov.mm တွင် အသေးစိတ် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ တိုးတက်လာတဲ့ ဈေးကွက်စီးဆင်းဝင်ရောက်လာမှုမှာ Logistic & Supply Chain ကုန်စည်စီးဆင်းမှုနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြပေးပါ။